N'ihi na ndị na-achọ a egwuregwu na saịtị na Bitcoin obi, n'ọkwá na ezi Ohere, na 1xBit bụ ihe magburu onwe oke. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-egosi na isi ihe mere ị na-etinye ego gị criptomoedas – ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na ọghọm, n'uche gị, karịa ndị positives – na 1xBit Brazil.
The saịtị na oru na January 2017 maka ogwe aka “cripto” Giant Russian 1xBet na 1xBit ike irite uru na ahụmahụ na aha nke ịkụ nzọ bụ gị “nwanne nwaanyị” na ka toro ngwa ngwa, inweta obi ike criptomoedas ọrụ. E, aghọgbu uto nke price ngwa ngwa na-ewu ewu nke Bitcoin na ndị ọzọ na altcoins n'oge afọ mbụ ya hụrụ ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-awụlikwa elu na nọmba na nkwa kwụsie ike na profitability nke azụmahịa.
Ekpuchi a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke egwuregwu na electronic sports, 1xBit ịgba chaa chaa saịtị na-nwere ọtụtụ bonuses na n'ọkwá na-adọta mmasị nke ọhụrụ ọrụ na ịnọgide na-enwe mmasị nke egwuregwu mgbe niile elu.
Na ikike ịnọgide na-amaghị aha na-egwu egwu na-na-adọrọ uche nke ọtụtụ egwuregwu na-ahọrọ ịnọgide na-amaghị aha.
Bitcoin bonus nabata 1xBit
N'ihi na ndị dị nnọọ ebe ahụ iji, ọ kwesịrị ngwa ngwa na mfe na mbara ala, nnabata bonus bụ 100% mbụ nkwụnye ego, ruo ego nke ₿1. The kacha nta na-enịm ke akaụntụ na-enweta ndị bonus bụ m₿5 (₿0,001).
Ma bonuses adịghị akwụsị e! nwee “bonus n'ọkwá isonye” ọrụ “My Account” e, mbụ nkwụnye ego, -enweta bonuses n'ihi na nke abụọ, atọ na nke anọ ego. Total, kwuo nwere ike iru ₿7!
Ụkpụrụ ndị kacha ahụmahụ:
maka 1st nkwụnye ego – 100% bonus elu ₿1
n'ihi na nke abụọ nkwụnye ego – 50% bonus elu ₿1
n'ihi na atọ tank – 100% bonus elu ₿2
na tank ụlọ – 50% bonus elu ₿3
Turnaround bụ mgbe 40 ugboro kasị elu uru, nkwụnye ego, na e nwere ike kwụọ ụgwọ na ego ma ọ bụ na ụdị “bonus ihe” (Ma echegbula, e nwere ọtụtụ ụzọ na-eji ihe ndị a). The n'obi imecha ya maka nnabata ndị a nkwụnye ego bonuses bụ mgbe niile 30 ụbọchị. The ọnọdụ na-ịkụ nzọ na a kacha nta ọnụego 1,6 na ha abụghị mkpụrụ ịkwụ ụgwọ (Cashback) na na irè n'ihi na niile otu ma ọ bụ accumulator nzo.
1Xbit edebanye, niile i nwere ime bụ click na “aha na-enweta a bonus”. eme. ebede, Ọ bụ nanị iji gosi na ị na-adịghị a robot na a na-ama aha. The saịtị na-egosi gị na aha njirimara na paswọọdụ. Nhọrọ, ị nwere ike izipu ihe email n'elu ikpo okwu iji zipu email na ozi a, ma ọ bụghị dị mkpa.
Dị ka e mere ihe nile site criptomoedas adịghị nkeonwe ma ọ bụ egosi na ọ dị mkpa, ọzọ ụlọ ịchọputa ụfọdụ, akaụntụ na closes ọrụ tụfuru ego.
Olee otú iji nweta gị bonus bitcoin nzọụkwụ
Iṅomi site na ịpị “aha na-enweta a bonus” ..
M₿5 ka a kacha nta ego.
Ebe ọ bụ na mpịakọta-n'elu 40 ugboro nkwụnye ego ego na-emezu, ị na-enweta gị bonus, uru ruo ₿1 ga-kwesịrị ekwesị n'ihi na nke abụọ nkwụnye ego bonus.
Ọzọ n'ọkwá 1xBit
Ọ dị mfe ọ ga-efu n'etiti ọtụtụ bonuses na n'ọkwá na egwuregwu 1xBit cha cha ịgba chaa chaa na-enye aha ọrụ. ebe a, anyị na-elekwasị anya na isi, nke na-akọwa ya na ime.
Ozugbo mbụ nkwụnye ego, na ihe ọkpụkpọ ga-ahọrọ otu n'ime mmadụ abụọ ọnụ ekwegasịrị enweta isi ihe dị ka nzọ. Na dị ka ị na-akpata ihe, i nwere ike iji nchekwa 1xBit. echekwa mgbe e mesịrị.
Naanị otu n'ime mmadụ abụọ n'ọkwá nwere ike nọ n'ọrụ mgbe ọ bụla otu oge. Ị nwere ike ịgbanwee si ibe, ma ihe niile ejibeghi ihe na-efu.
Player na-amasị ndụ ịkụ nzọ-ahọrọ nke a bonus. Nanị nti maka nke a ụdị nzọ na ụbọchị ọ bụla. Ka ị na-nzọ, ka ị na-irite ihe. Daily ihe na-ekesa dị ka ọnụ ọgụgụ nke nzo enịm na arụmọrụ. onye ọ bụla 24 awa (Etiti abalị na Moscow), atụnyere itule na-ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ a rụrụ. Ya mere, Ọ ghọrọ onye na akaụntụ maka nkesa ihe.
The usoro bụ:
ihe = (akaụntụ itule – ozi) * akwụ ụgwọ% / 100
% Akwụ ụgwọ = mmeri ma ọ bụ mmeri 10 itule / *
Bụrụ na nke mmeri, n'ịtụle net revenue si ịkụ nzọ.
Bụrụ na nke meriri, furu efu uru-agụ.
All ụkpụrụ a ga-nzo na-kwukwara elu na-etolite na “mmeri ma ọ bụ mmeri.”
O yiri a bit mgbagwoju anya ịghọta, ma na saịtị maka a ọzọ nkọwa zuru ezu. Ná ngwụsị nke ụbọchị, akaụntụ e mere na onye ọrụ na-enweta ihe kwesịrị ekwesị ihe.
Na nke a mode, n'agbanyeghị nke egwuregwu nzọ na-emeri, ọkpụkpọ Enwee Mmeri ihe ka nzọ. Otu dị ka “Ego na akaụntụ gị itule”, e na-a usoro na-ekpebi na ọnụ ọgụgụ nke ihe na-ọdịda.
Points = Bet Ọnụ ego ($) * price enye
uru nke na-enye = square mgbọrọgwụ nke nzọ price obere 1.
= Kacha ọkọnọ 5.
12 bonuses na n'ọkwá ọzọ
Tụkwasị na nke a mbụ n'ọkwá, ịkụ nzọ na Bitcoin ma ọ bụ ndị ọzọ cryptocurrency na 1xBit i nwere ihe 12 bonus nhọrọ ma na cha cha na egwuregwu ịkụ nzọ. E nwere kwa ụbọchị na-enwe kwa izu bonuses na n'ọkwá ma n'okpuru.
Kasị isi egwuregwu ihe ndị mere n'ụbọchị na-enweta a pụrụ iche accumulator. nzo grouped merie a nkwalite ga-enweta 10% na price na-abawanye.
Ònye bụ ọduọ ofufe na, ma ọ bụrụ na ọ na-aga na-ezighị ezi na a ikele egwuregwu ị nwere ike nweta iji nweta jackpot na ohere mpere “usoro 1” 1xBit
Nke a bụ n'ihi na onye ọ bụla m₿1 efu, na freewheeling player 1 -enweta nkwanye egwuregwu. Iji ruo eruo maka a nkwalite, na-enye ga-dịkarịa ala m₿1 na a kacha nta ọnụego 1,4. Ma ọ bụrụ na ihe na-akwakọba nzọ dịkarịa ala otu maa na-na Formula 1.
Ọzọkwa, ị criptomoedas, 1Xbit cha cha ịgba chaa chaa na egwuregwu ịkụ nzọ ihe ọ na-akpata a otutu ihe na ike ga-gbapụtara na-echere saịtị. ọ, isi ihe na-gbanwere ịgba chaa chaa ma ọ bụ ndị ọzọ Koodu, amụma, insurance ma ọ bụ ịgba chaa chaa na cha cha, ma ọ bụ na ha nwere ike converted n'ime ego. E nwere ihe 30 dị iche iche mgbapụta nhọrọ.
onye ọ bụla 500 na-ekwu ọnụ ahịa US $ 10. na 50 ihe, n'ihi na ihe atụ, ị pụrụ ịzụta a koodu n'ihi na a free nzọ ke ọ bụla egwuregwu omume e hotara na 1,8 ma ọ bụ karịa. I nwekwara ike ịzụta akụ chests na-agbalị ha chioma na utu aha, tiketi lọtrị, free ịkụ nzọ ìgwè ke football dị ka nke ọma ..., ụlọ ahịa jupụtara nhọrọ.
1Xbit bụ a pụrụ ịdabere na?
Mgbe na-arụ ọrụ na dị nnọọ criptomoedas obodo game, doro anya, 1Xbit ebelata nhọrọ gị, ma n'otu oge nwere nnwere onwe na-enye virtual ego, dị ka ịcha red teepu na nyochaa njirimara nke ọrụ.
A Ọdịdị enwe a ike, ọ bụ ezie na nke otu ìgwè na-agba 1xBet, ịkụ nzọ ibu fiat ego nwekwara anabata criptomoedas, na e nweghị ihe ize ndụ na saịtị anaghị akwụ ụgwọ ya egwuregwu. Ma dị ka 1xBet 1xBit ghara inye gị ozi mfe. Ọ nwere ọrụ na saịtị nke Bitcoin ịkụ nzọ ikike na Curaçao.
The 1xBit enyekwa Forex ọrụ ndị itinye ego na criptomoedas.
Ịkwụ ụgwọ Ụzọ: ego na withdrawals
mgbe 28 dị iche iche criptomoedas na 1xBit a na-anabata nwere ike ikwu iji Bitcoin ịkwụnye ego n'ụlọ. N'ihi na ndị nwere nanị Bitcoins ngalaba “ịkwụ ụgwọ”, nhọrọ “ike”, na “Buy cryptocurrency” (a red button, mfe amata), nke ụlọ 66 criptomoedas Exchange na-egosipụta. Họrọ a pụrụ ịdabere na Buy bitcoins.
Mgbe na-eme zuo, dị nnọọ nyefee criptomoedas maka akaụntụ gị 1xBit. 1Xbit bụ otu n'ime ụlọ na-abịa n'ahịa jupụta chakoo ekpe site Bovada ụlọ na-anabata bitcoins, ma kwụsịrị arụmọrụ ke Brazil.
Ịdọrọ ego, e 20 dị iche iche nabatara criptomoedas, na usoro a na-nwesịrị ịkwụnye nyefe na-mere si bookmaker gị na izo ya ezo Pọtụfoliyo.
The dịgasị iche iche nke egwuregwu na-ekpuchi na n'ụlọ na ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa tupu egwuregwu dị ndụ na-eme ka bettor mgbe enweghị ebe a na-play. The nhọrọ ọtụtụ na ị nwere ike họrọ nke menu profaịlụ iche Sports na e nwere a “nnukwu ihe” maka ndị na-amasị na-eso ihe ndị kasị mkpa tournaments na ụwa, n'agbanyeghị nke egwuregwu.
Anyị mmasị egwuregwu, football, Ọ guzo n'ụzọ doro anya na ụlọ, na mkpuchi nke isi n'asọmpi na-egwuri n'ụlọ na Series A na D, na Brazil Cup, League of inyom na State.
Iji nri nke ihuenyo, dị n'okpuru ebe tiketi na ịkụ nzọ bụghị a mara ọkwa nke pụrụ iche na-enye, nke bụ ndị na-enye ukwuu likelihood nke na-emeri home. 1Xbit na ịgba chaa chaa saịtị na-enye ọrụ a na peeji nke na naanị tupu game ihe ọtụtụ Ichi, niile ọnụ ọgụgụ bettor mkpa bụghị ịchọ ozi, Google plus.
E, dị ka ọ bụla bookmaker, na 1xBit ana achi achi na na-akwụ ndị kasị mma emegide na ahịa. Ọ bụghị mgbe niile ka, ma ulo-akwụ ọma, SIM. N'elu nkezi ọtụtụ Sporting ihe. Ọ bụrụ na ị maara otú e si eme ihe nke ọma gị isi, bonuses na-akwakọba ụbọchị otú i nwere ike inwe oké bargains.
Nke a Bitcoin ịgba chaa chaa saịtị nwere atụmatụ na-inweta ala gafee nyiwe alaka, nke bụ na o na-ewu stakes. The ọkpụkpọ nwere ike họrọ ndị ahịa na-eme ka gị guesses, e, mgbe, ulo nwere na emegide.
mgbe, ma ọ bụrụ na ị na-achọ iche iche na ihe ọhụrụ egwuregwu ịkụ nzọ, i nwere ike, na 1xBit, football nzọ, volleyball, basketball maka égbè, netball na sumo. E nwekwara mba egwuregwu nhọrọ, dị ka ihu igwe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ọkà mmụta sayensị.
cha cha 1xBit
karịa 3.000 oghere nọmba nke ụlọ ọrụ ndị na-akwanyere ùgwù na nhọrọ ahịa. Total, ulo nwere 92 software mgbere ha oghere igwe na ndị ọzọ na-agba chaa chaa, como baccarat, keno, blackjack, egosighị mmetụta e roleta, ndị ọzọ nhọrọ. The ndepụta gụnyere aha dị ka Endorphina suppliers, pragmatic na egwuregwu Betsoft, dị nnọọ ka na-egosi na 1xBit bụ a pụrụ ịdabere na.
N'ihi na ndị na-ahọrọ na-play quality ndụ cha cha bụkwa elu. e 12 suppliers, gụnyere ndị Ezugi na Game Evolution na-anakọtara na ndụ na-ere ahịa na-egwu ruleti, egosighị mmetụta, blackjack, baccarat, craps, Ihe egwuregwu na ndị ọzọ na ụgbọelu. All ná nkasi obi nke ebe obibi gị.
Ọ bụghị gị nkezi nzọ
N'ihi na ndị na-amasị ịgba chaa chaa ma ọ bụ ekwentị cha cha egwuregwu, 1Xbit nwere a ngwa ngwa ụzọ, mma ma nke ọma ike na-eweta niile atụmatụ nke saịtị. Ma ọ bụrụ na ị na-achọghị iji wụnye ngwa 1xBit, saịtị bụ mwute, ndị ọzọ okwu, emegharị na obere enyo gị ama na-enweghị adịkwa arụmọrụ.
Ịbụ 1xBit ngwa ma ọ bụ ihe nchọgharị gị ama, ị nwere ike mfe na-eso ọtụtụ transmissions n'elu ikpo okwu, nakwa dị ka na-egwuri egwu na-ebi ndụ cha cha, enweghị mmebi nke player, ebe ọ bụ na nnyefe nke ìhè bụ. The naanị a chọrọ bụ a anụ njikọ Ịntanetị.
The ngwa dị maka download na saịtị ahụ site na 1xBit mobile gam akporo na iOS.
1Xbit ndụ ịkụ nzọ
Nke a bụ otu akụkụ na saịtị na-ekwu ọ bụ mpako na-a mkpa. Na-adịghị ata ata mgbe ọ na-etu ọnụ na. ndụ na-agbasa ozi nke isi ihe ndị dị na ụwa egwuregwu, na nwere a-akpali nnọọ mmasị feature, nke bụ “Home MultiLive” i nwere ike tinye multiple ihe na-eso ndụ ịkụ nzọ na ha n'otu oge na-enweghị uche nke ihe omume ndị ọzọ.
Na-ebi ndụ ịkụ nzọ 1xBit-ejedebeghị na omenala egwuregwu. The saịtị nwekwara a mbara mkpuchi nke electronic sports (e-sports), sports electronic. E transmissions Counter Ebu, Hearthstone, Starcraft II, Nsogbu Royale, FIFA, Dota, akpa ọchị, Rainbow Six e Streetfighter, ndị ọzọ a ma ama egwuregwu si dị iche iche consoles.
Ọ bụrụ na ị na-aghọta na-eme electronic sports, 1Xbit nwere otu nke kasị zuru ezu menus na-enwe ma na-agwa ya m₿.
Na player, ọ ga-abụ egwuregwu ma ọ bụ na kọmputa egwuregwu, nwere ha nwere ọnụ ọgụgụ na-emelite ndụ na-ya kwubiri ma ọ bụ na-emechi a nzọ (ya na-eje ozi) ị chọrọ.
VIP ego azụ
Iguzosi ike n'ihe omume raara nye cha cha egwuregwu 1xBit, nwere 8 ọkwa dị iche iche. The ọzọ na player arụ, ihe isi ihe ndị ị ga-esi, elu larịị na nloghachi nke ego natara. The nkwụghachi ngwa nwere ike mere-enwe kwa izu.
Na nke ọ bụla larịị nweela, pasent abawanye ego azụ, na-eru elu 11% nkwụghachi.
E nwere online maka oge niile dị ka onye ọrụ na-ebi ndụ chat, na enweghị ike ịmata kọntaktị 1xBit. Ma ọ bụrụ na obi abụọ na-adịghị kpebiri ngwá ọrụ a, ị nwere ike izipu ihe email na bookmaker. na nke a, N'ezie, Ọ na-achọ na e-mail address na-enweta azịza. Ọzọ nhọrọ bụ ụdị edejupụta na izipu ozi site na saịtị, nke nwekwara akpọ -email address.
Ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ kọntaktị nhọrọ, azịza abịa ozugbo na n'ụzọ udo.
The 1xBit nwekwara a ọma ọnụnọ na-elekọta mmadụ na netwọk, na mesiri ike na Twitter na Instagram, ebe Brazil peeji nke bụ nnọọ ọrụ. The YouTube ọwa dịkwa nnọọ ọrụ n'aka, ma ọ bụghị a version na Portuguese.
akpatre, saịtị nwere a blog na-gị ahịa asian. Na-eweta ozi ọma banyere egwuregwu ụwa, criptomoedas, n'ọkwá na ọhụrụ egwuregwu na-gụnyere n'elu ikpo okwu. Na nnọọ ugboro ugboro emelitere ngalaba jikọtara electronic sports. Ọ bụ uru na-arịba ama.
Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ asụsụ na ọ maara na saịtị. Ọ bụghị ihe na-erughị 60 asụsụ dị iche iche. O 1xBit, ike nanị criptomoedas họọrọ kwusi ókè nke mgbanwe, na-achọ imeri niile ahụ ókè ebe ịkụ nzọ na-ekwe.
Ọbụna mee ka onye ọ bụla obi na-adị mfe mgbe na-eme nchọgharị na-eme ka ha analysis, ulo awade isii dị iche iche tikeeti formats. ntụpọ, na nke ahụ bụ otu na anyị na-eji na Brazil, US, na UK, Hong Kong, Indonesia na Malaysia. Ònye chọrọ nzọ chọta ọ bụla mara format.
Mee ka gị na ndebanye 1xBit. Ị na-aga na-efu ịkụ nzọ nhọrọ
The 1xBit were egwuregwu ịkụ nzọ criptomoedas ka a ọhụrụ larịị, na mpi-akpụ akpụ, n'ihe dị mma maka anyị niile. Kasị na saịtị na ihe ndị magburu onwe aha na ọrụ e, ndị kasị mma n'ihi na egwu egwuregwu obodo. Ndị ọzọ mma nzo obibi na-anabata Bitcoin bụ Sportsbet.io na 22bet.
The 1xBit bụ pụrụ ịdabere na-nwere otu nke kasị ukwuu menus gị ahịa. Ma na egwuregwu ịkụ nzọ na electronic egwuregwu ma ọ bụ na ukwu ha cha cha, fun na-ekwe nkwa maka player.
E nwere ọtụtụ ọwa nke nkwurịta okwu, ma ha na-arụ ọrụ nke ọma. O nwere ike ịbụ, ọbụna ego nke ihe ndị na-dị, n'elu ikpo okwu nwere ike iyi ihe a bit anya, na ụfọdụ nnyocha dị mkpa menus ruo mgbe ị na-ahụ ihe ị chọrọ. Nke a bụ otu n'ime isi ihe ndị nwere ike mma site na ụlọ.
Otú ọ dị, na a n'ozuzu analysis, 1Xbit bụ a dị ezigbo mma ebe ịmepụta otu akaụntụ – nke bụ nnọọ adaba na ngwa ngwa – na itinye ego ha free oge egwuregwu na-ahụ ụwa nke criptomoedas.
oké uru na aha na-enweghị mkpa ka a mata
Ọtụtụ nhọrọ na ebe niile: sports, cha cha na egwuregwu
Ngwa ma dị ezigbo mma mobile saịtị
A ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe na-ebi na-agbasa ozi
A usoro nke n'ọkwá
Saịtị na a bit mgbagwoju anya site ọmụma dị ukwuu
E nwere ike ịbụ a ukwuu ọnụ ọgụgụ nke ozi ọwa
The 1xBit naanị nzọ na Bitcoin na criptomoedas?
Sim, 1Xbit bụ nanị ore maka bitcoins na altcoins. The saịtị awade ọtụtụ nhọrọ maka bitcoins ma ọ bụ altcoins ịzụta gị n'elu ikpo okwu.
Olee bitcoin 1xBit bonus ọrụ?
The ụlọ na-enye a bonus 100% na uru nke mbụ nkwụnye ego na kacha ₿1. E nwekwara bonuses nke abụọ, atọ na nke anọ nkwụnye ego na zuru uru nwere ike iru ₿7.
Olee otú Bet na Bitcoin na 1xBit?
Ọ bụrụ na ị na-adịghị bitcoins ma ọ bụ ndị ọzọ cryptocurrency nabatara bookmaker, ị nwere ike ịgbanwe gị ezigbo m₿ ụlọ depụtara na saịtị 1xBit. Mgbe i nwere gị bitcoins n'ihi, usoro yiri ndị ahụ nke nzo enịm na fiat ego.